samedi, 15 août 2015 07:46
Fanafihana mitam-basy : Voaroba ny volamena, tovolahy iray naratra mafy voatifitra
Tokantrano iray ao Andabizy Toliara no notafihina jiolahy efatra mitam-basy tsy nisaron-tava ny zoma 14 aogositra naraim-be tamin’ny roa ora. Nitaky vola avy hatrany ireo jiolahy vantany vao tafiditra ny trano. Nilaza tsy manana ilay raim-pianakaviana tompontrano, izay mpamily taksiborosy, ka ny zanany lahy, 19 taona, no notifirin’ireo jiolahy teo amin’ny kibony ka naratra mafy. Tsaboina ao amin’ny hopitaly ilay tovolahy. Lasan’ireo jiolahy ny volamena niampy finday tao amin’ity tokantrano voatafika ity. Manahy ny polisy fa mety valifaty ity nitranga tao Andabizy ity, fa tsy asan-jiolahy toy ny fahita hatramin’izay.
vendredi, 14 août 2015 15:07
Hanampy ireo olona sahirana ara-pivelomana ny Kominina an'Antananarivo.
mardi, 11 août 2015 15:01
Aretina lefakozatra : Misy tranga telo vaovao hita ao Boeny
Tongan’ny aretina lefa-kozatra ihany ao amin’ny faritra Boeny na dia efa betsaka aza ireo vaksiny natao. Ankizy telo no tratran’io aretina lefakozatra io ao an-toerana amin’izao fotoana, ka iray any Soalala ary roa ao Mahajanga tampon-tanàna, araka ny tatitra nataon’ny Talem-paritry ny fahasalamam-bahoaka ao Beoeny, Dr Ravalomanda Harison Nirina. Nampahafantariny fa “aty amin’ny faritra Afrika sy maneran-tany dia i Madagasikara no mbola anisan’ireo firenena misy ny aretina lefakozatra, izay mahatonga ny zaza halemy sy tsy handeha tampoka”. Ho fanombohana ny ady dia nanentana avy hatrany ireo Sefo Fokontany ny Prefen’i Mahajanga, Rakotoaridina Dieudonné, hidina hanao fanentanana ny ray aman-dreny rehetra hitondra ny zanany ho atao vaksiny fanefitra amin’ny aretina lefa-kozatra. Ny Ray aman-dReny tsirairay dia manana adidy amin’ny famongorana ny aretina lefakozatra. Ary henatra ho an’ny faritra Boeny izy io raha tsy resy, noho i Boeny indrindra i Mahajanga malaza eo amin’ny sehatry ny fizahantany.